Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-barracuda fish | Ngeentlanzi
Intlanzi yasebarracuda, Yaziwa kwaye yoyikwa ngobukhulu bayo obukhulu kunye nembonakalo eyoyikisayo, ngumba ophambili wenqaku lanamhlanje. Yintlanzi yetyuwa yamanzi, efana Iintlanzi zodwaUhlobo lweSphyreaena. Unomdla wokuba kuphela komntu osapho lakwaSphyraenidae. Igama layo lenzululwazi ngu ISphyreaena barracuda.
Kweli nqaku siza kuchaza zonke iimpawu zalo, indlela yokuphila, ukondla nokuzala. Ndiyathemba ukuba uyifumanisa inomdla kwaye ufuna ukwazi ngakumbi malunga nentlanzi yebarracuda.
2 Ukutya kunye nemikhwa
4 Ibarracuda iintlanzi kunye nabantu
Olu hlobo luyaziwa ngegama le-barracuda enkulu ngenxa yobukhulu bayo obukhulu. Ihlala kuwo onke amalwandle ashushu kunye neenjiko zomhlaba. Inokuhlala emanzini ashushu ashushu ikwafumaneka kwimangrove nakumawa enzonzobila ezinzulu ezinomda wobunzulu beemitha ezili-110.
Ziintlanzi ezinkulu ezithi Zimalunga nemitha ubude kwaye zinobunzima obuphakathi kwe-2,5 kunye ne-9 kg. Kukho ezinye zeesampulu ezinkulu ezinobunzima obungaphezulu kwama-23 kg kwaye zinokulinganisa iinyawo ezintlanu. Umbala onombala oluhlaza ongwevu kwinxalenye yawo ephezulu. Emazantsi linombala omhlophe osilivere kunye nekalika.
Ingabonisa imiqolo emnyama ngendlela enqamlezileyo enamabala amnyama kumacala asezantsi. Inombala ophelileyo kumqolo wesibini wokungqineka kunye nakumaphiko endunduma kunye necaudal kwaye ngumahluko phakathi kombala omfusa mnyama kumnyama kunye neengcebiso ezimhlophe.
Ihlala iyintlanzi iyodwa xa ifikelela ebudaleni. Ngokukodwa xa ubusuku bufika, bahlala bebhadula bodwa emva kosuku olunzima. Nangona kunjalo, emini, ungabona ukuba abantu abadala bafundisa njani ulutsha ukuba luzingele ezinye iisampulu kwaye bafunde ukuzikhusela ekuhlaseleni.
Zizo iintlanzi uhlala ehlasela abantu abenza umonakalo omkhulu. Ukuba babeka iingqondo zabo kuyo, banakho ukubulala ngokukhawuleza kwaye batshabalalise iintlobo ezininzi kunye neesampulu kunokuba zityiwe. Ezi zezinye zezizathu zokuba iyintlanzi eyoyikwa kakhulu, hayi ukubonakala kwayo kuphela, kodwa nokuziphatha kwayo. Kuphela ngamanye amaxesha abahlaseli ngaphandle kokuba bahlaselwe.
Ukutya kunye nemikhwa
Yintlanzi ekwaziyo ukuzithengela ezinye iindidi ngobushushu obukhulu kunye nesantya. Basebenzisa ukumangaliswa njengesixhobo. Luhlobo olunomdla olunomdla oluthatha ithuba ngamanye amaxesha obuthathaka ukwenza ukubonakala kwalo kwindawo. Xa bejonga ngexhoba, bayatsiba kulo kubangela isitampu ukuya kuthi ga kwi-43 km ngeyure kwisantya. Lo mkhwa wenza ipesenti yakho yokubamba ibe phezulu kakhulu.
Xa sele bebadala, le predation yenziwa yodwa. Kodwa bebancinci, uninzi lwabo luhlangana rhoqo ukuqinisekisa ukubanjwa kwexhoba kunye nokuphuhlisa ukuziqhelanisa nokufunda ngakumbi.
Zondla ubukhulu becala kwezinye iintlanzi ezilinganayo okanye ezincinci kunezo zazo. Ngamanye amaxesha kunokubonwa ngokuzingela iisampulu ezinkulu. Ukwenza njalo, bayazikrazula iziqwenga zenyama njengoko bethoba ixhoba. Ziyakhuphisana ngokwenene kwaye ziyabonakala zikhuphisana neentlobo ezifana ne-tuna, intlanzi yenaliti nditsho neehlengesi.
Phakathi kweendidi zeentlanzi ezitya kuzo iintlanzi, sifumana amaqela, ii-snappers, ityhuna encinci, intlanzi yekati, ii-anchovies, herring kunye ne-mullet ebomvu. Kubo bonke ibaluma esiqingatheni ukuze babe buthathaka ngokupheleleyo kwasekuqaleni kokuzingelwa. Kuye kwabonwa kusityiwa ixhoba elincinci elisebenzisayo njengokutya okungaqhelekanga xa liphambili.
Ngenxa yesakhono sayo sokuloba kunye nokukwazi ukuzingela, bambalwa abaxhamli bendalo abanentlanzi i-barracuda. Ezona zinokuthi zithathelwe ingqalelo njengezilwanyana zazo zezi Ukrebe omhlophe, imikhomo yokubulala kunye nabantu, siyibamba ukuba itye.
Malunga neenkcukacha zokuphinda ziveliswe azazi. Umzekelo, ixesha kunye nendawo apho ukuzala kwenzeka khona akaziwa. Kucingelwa ukuba kwenziwe ngentwasahlobo xa amaqondo obushushu ephezulu, ngelixa abanye bakholelwa ukuba bangayenza unyaka wonke, ngaphandle kwezona nyanga zibanda zasebusika.
Iipateni zokusasaza azinakufana kuzo zonke iindawo zehlabathi apho zifumaneka khona. Into eyaziwayo kukuba ayilulo uhlobo ekufuneka lukhusele amaqanda de aqandusele, kodwa awashiye ephambuka, apho amila khona ade aqandusele. Ngokwesiqhelo, ukuba zizala kufutshane namachweba apho amanzi engekho nzulu, imibungu eqandusela kumaqanda ayo baya kwiindawo ezinendawo ezinzulu nezomileyo ukuze bazive bekhuselekile.
Kubude nje obuyi-80mm, imibungu iqala ukuya emanzini anzulu. Sele ingama-300 mm ubukhulu xa bekwazi ukungena emanzini avulekileyo kwaye xa bengo-500 mm baya kuphumela elwandle, beshenxa ngokupheleleyo kude namachweba.
Ibarracuda iintlanzi kunye nabantu
Udumo lwe-barracudas luyafana nolo lukrebe. Ziyingozi kubatshintshi kunye neentlambi ezikufutshane nonxweme. Ngokuba nemikhwa emibi, Unokudida abantu abahlukeneyo, bekholelwa ukuba zezinye izilwanyana ezinkulu kwaye bayazilandela ukuba zitye iintsalela zexhoba abalibambayo.
Inqabile, kodwa kuye kwakho iimeko apho iindadi zixele ukuba zilunywe zii-barracudas. Ngokwesiqhelo olu hlaselo luhlala lubangelwa kukungabonakali kakuhle emanzini kunye nokudideka kwezi ntlanzi nezinye izilwanyana ezinkulu.
Gwema ukuthinta ngezandla zakho okanye ukuzama ukubamba i-barracuda njengoko bekwazi ukukrazula ulusu lwakho kunye nokuluqhawula. Nangona ezi ntlanzi zingabathandi abantu njengokutya, Ukuba sizama ukuyibamba, iyakucinga ukuba lixhoba elizama ukubaleka okanye liyigqwethe kwaye iya kugqiba ikulume.
Isetyenziswa ngabantu abaNtsundu ukwenza iisuphu kunye neesosi kwaye bayayitshaya ukuyikhusela kwaye bayinike incasa engcono.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku likuncede ukuba wazi ngakumbi malunga neentlanzi zebarracuda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yaseBarracuda